Qeybta 1: Waa maxay adeegga share qoyska music tufaaxa?
Qeybta 2: Sida loo dhigay ilaa qaybsiga qoyska ee Apple Inc Music?
Qeybta 3: Download music hoorto xor ah oo lacag la'aan ah oo la TunesGo wadaagaan
Apple Music app waa music geeyo madal oo siinaysaa macaamiishu ama isticmaala inay malaayiin heeso ka dhisan dunida dacaladeeda, u helaan oo ay la socdaan 24/7 isticmaalka xarun raadiye oo ku nool. Adeeggan waxaa laga heli karaa lacag la'aan ah oo ah qiimaha ee 90 maalmood ee ugu horreeya sida version tijaabo ah laakiin in ka dib markii aad u baahan tahay si ay u qori waa in ay sidoo kale xubin gaar ah ama doortaan qorshaha qoyska. Halkee oo hal gacan, xubin qofka loo heli karaa $ 9.95 bishiiba, qorshaha qoyska saamiga loo heli karaa $14.95 bil kasta. Adeeggu wuxuu qoyska share of music Apple waa fursad meesha A.villa 6 xubnood oo qoyska ka mid ah u isticmaali karaan adeegga. Aan ka badan oo ku saabsan adeeggan bartaan.
On Mac, iCloud qaybsiga qoyska aad u saamaxaaya in ay arkaan songs iibsaday xubnaha kale ee qoyska iibsadaan.
Qorshaha music Tan waxaa tagged qiimo ka badan macquul ahayn xubin shakhsiga ah iyo caddaynaysaa in la kharash-friendly dheeraad ah.
Qorshahani waxa uu awood u 6 dadka si ay u isticmaalaan adeegga iyo hagaagsan heesaha oo midba midka kale ayaa loo ururin.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan adeegga Apple share qoyska music waa in ay caddaynaysaa in la xal ka badan la taaban karo iyo kharashka saaxiibtinimo qoys kuwaas oo si dhab ah u iilato dhinaca muusikada iyo aan awoodi karin inaad iibsato qorshe u gaar ah oo kala duwan.
Waxaa suurto gal ah in aad u aragto gabayadii iibsadaan xubnaha kale ee qoyska dhex adeegan.
Qorshaha qoyska, playlists la mid kale la wadaago iyo syncing waa fududdahay.
Adeeggan waxa kale oo awood u abuurista ID Apple ah ee caruurta ka yar 13 xidhan xisaabtii waalidka.
Waxa kale oo wanaagsan oo la qaybsiga qorshaha qoyska on music Apple waa in ay sidoo kale awood u qaybsiga jadwalka qoyska iyo maktabadaha sawir.
Mid ka mid ah diidmo ee Apple qorshaha wadaagga qoyska music waa inaadan ka dhuuman kartaa gadashada ka xubnaha kale ee qoyska. Taas macnaheedu waa in haddii aad dooneyso in aad sii qulquli ama gabay la lyrics cad, ka dibna dhamaan xubnaha qoyska ka mid ah qorshaha waxaa laga yaabaa inay arkaan.
Apple qorshaha wadaagga qoyska ma aha mid aad dareen leh taas oo macnaheedu yahay in ay adag tahay in ay go'aan ka noqon doona qabanqaabiyaha qoyska ama qofka ugu muhiimsan ee wax ka qabashada xisaabta iyo wixii la mid ah.
Talaabada 1: tallaabada ugu horraysa waa in la hubiyo in aad leedahay ID Apple kala saxiixdeen in ay iCloud iyo Lugood. Waa inaad kaloo haysataa iPhone, iPad, iPod Touch la macruufka 8 ama Mac OS X la Yosemite. Haddii aad u baahan tahay, waxaad sidoo kale abuuri kartaa ID Apple ah oo naga ilmaha ka dibna iyaga ku dari koox qoyskaaga.
Talaabada 2: Haddii aad tahay iPhone, iPad ama iPod user ah, waxaad u baahan tahay u tag goobaha ay ku qalab macruufka ka dibna si ay u tagaan iCloud. Haddii aad tahay user Mac ah, ka dibna waxaad u baahan tahay Dooro Apple menu> nidaamyada la door ka dibna riix on iCloud.
Talaabada 3: macruufka isticmaala, waxaad u baahan tahay inay hesho 'Calan qaybsiga qoyska "oo markaas garaac" Ka bilaabay'. Dadka isticmaala Mac, waxaad u baahan tahay riix Calan Qoyska.
Talaabada 4: Tallaabada xigta ee macruufka users waa si loo xaqiijiyo in aad rabtid in aad noqon qabanqaabiyaha qoyska iyo in aad saxiixay in la ID Apple shakhsi ahaaneed. Users Mac dhanka kale u baahan tahay in aad raacdo tilmaamaha onscreen.
Talaabada 5: Hadda waa in aad raacdo tilmaamaha onscreen haddii aad tahay macruufka qalab user.
> Resource > Music > Qoyska Sharing Apple Music